विन्टेज आउटफिटहरू सिर्जना गर्न बुनेको कार्डिगनहरूमा शर्त लगाउनुहोस् बेजिया
मारिया vazquez | 05/04/2021 18:00 | मैले के लगाउने?, प्रचलनहरू
के तपाईं घरमा कपडाहरू भण्डार गरिएको छ जुन तपाईंले दशकहरूमा नहेर्नु भयो? समय छ र ती मार्फत चहलपहल गर्न उनीहरूलाई मौका दिनुहोस् हातले बुनाई कार्डिगनहरू कि हामी सबैको थियो वा कम्तिमा हामी सबै जो आवश्यक उमेरको हो।
यदि तपाईंसँग कुनै छ भने, तपाईं भाग्यमा हुनुहुन्छ! तपाइँ पुरानो शैलीहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ प्रवृत्ति र त्यो वस्त्रलाई दोस्रो जीवन दिनुहोस्। के तपाईं चीजहरू भण्डार गर्नुहुन्न? चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईंलाई वर्तमान फेशन संग्रहमा मनपर्दो फेला पार्न कुनै समस्या हुनेछैन किनकि हामीले केहि महिना अघि घोषणा गरिसकेका छौं, ती मौसमको चलनहरूमा एक हो।
ओपनवर्कको साथ, कढ़ाई फूलहरू, चेकर्ड प्रिन्टहरू वा विपरित ट्रिमहरू। पुरानो प्रेरित बुनाई कार्डिगन्स यो मौसममा प्रवृत्ति हो। र एक चलनको रूपमा, तपाईं तिनीहरूलाई फेसन फर्महरूको संग्रहमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ जस्तै जारा, मान वा एसोस।
तटस्थ रंग वा नरम पेस्टल शेडहरूमा उनीहरूको यस वसन्त summerतु गर्मी २०२१ को मौसममा ठूलो भूमिका हुनेछ। र यिनीहरूमा एकीकृत गर्न जटिल हुनु आवश्यक पर्दैन। वास्तवमा, तिनीहरूलाई जीन्सको साथ जोड्नु भनेको इन्स्ट्याग्रामर्स बीचमा सबैभन्दा लोकप्रिय विकल्प हो।
तिनीहरूलाई जोड्नका लागि विचारहरू
जीन्सको एक जोडी र एक कार्डिगन, यस वसन्तमा तपाईलाई थप आवश्यक पर्दैन। मेरी जेन्स वा टी-बार-शैली कम हिलको जुत्ता र एक हातको टोकरीको साथ हेराइ पूरा गर्दै, लुईसा डुरेलले गरे जस्तै तपाईले एउटा भिन्टेज-प्रेरित लुक प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन दैनिक प्रयोगको लागि उपयुक्त छ।
तटस्थ टोनमा eight वा ओपनवर्कको साथ कार्डिगनहरू पनि लगाउनको लागि आदर्श हो पोशाक वा फूल प्रिन्टको साथ माथि। र यदि तपाईं एक सत्तरी-प्रेरित शैली चाहनुहुन्छ भने, तपाईं केवल एक फ्लेर्ड मिनी स्कर्ट र एक मिल्दो प्लेड कार्डिगनको लागि जानु पर्छ, के तपाईं हिम्मत गर्नुहुन्छ?
तपाइँले यस मौसममा पुरानो देखिने पुरानो सिर्जना गर्न मद्दतको अतिरिक्त, यी कार्डिगनहरू कलरहित र अगाडि जोडिएको ग्रीष्म comesतुमा तिनीहरू अत्यन्त सहयोगी हुन्छन्। हामी निश्चय छौं कि तपाईले उनीहरूमा भन्दा अधिक प्राप्त गर्नुहुनेछ तपाईले सोचेको भन्दा के तपाइँ यस प्रवृत्तिमा सम्मिलित हुनुहुन्छ?
छविहरू - @juliesfi, @maralafontan, @lolo_bravoo, @chloecleroux, @elliiallii, jane_mcfarland, @ mirenalos, @audreyrivet, @mariellehaon
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » फेसन » मैले के लगाउने? » पुरानो पोशाकहरू सिर्जना गर्न बुनेको कार्डिगनहरूमा शर्त लगाउनुहोस्